တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဆေးရုံ စာစစ်ဌာနများကို လိုအပ်ပါက ထပ်တိုး ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် ဟုဆ?? - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဆေးရုံ စာစစ်ဌာနများကို လိုအပ်ပါက ထပ်တိုး ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် ဟုဆ??
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုရန်အတွက် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နေကျ ဆေးရုံစာစစ်ဌာနများကိုဖွင့်လှစ်မည့်အပြင် စာ ဖြေသူတို့၏ဆေးရုံတက်ရောက်ရသည့်အနေအထားအပေါ်မူတည် ပြီး ထပ်တိုးဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပမည့်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကိုးသိန်း နီးပါးဖြေဆိုရန် စာရင်းပေးသွင်းထားပြီး စာစစ်ဌာနပေါင်း ၁၈၀၀ ခန့် ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း အဆိုပါစာစစ်ဌာနများထဲမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ အမျိုးသမီး ဆေးရုံ၊မြောက်ဥက္ကလာပ(ဝေဘာ ဂီဆေးရုံ)၊မြောက်ဥက္ကလာပဆေး ရုံ၊မန္တလေးဆေးရုံကြီးတို့ကိုထည့် သွင်းဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အခြားမြို့များရှိ ဆေးရုံစာစစ်ဌာန များကို စာဖြေသူအခြေအနေအ ပေါ်မူတည်ပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာ စစ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
“ရန်ကုန် မန္တလေးကတော့ပုံ မှန်ဖွင့်လှစ်နေကျအတိုင်းဆေးရုံ စာစစ်ဌာနတွေကို ဖွင့်မှာပါ။ရန် ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့က စာဖြေသူ တွေစာမေးပွဲမဖြေခင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြေ နေဆဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးရုံတက်ရတယ် ဆိုရင်စာစစ်ဌာနဖွင့်ထားတဲ့ဆေး ရုံတွေမှာတက်ဖြေလို့ရမယ်။ ကျန် တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ မဖြေခင် တက်ရတယ်ဆိုရင်လည်း ဖွင့်ပေး မယ်။ ဖြေနေဆဲတက်ရတယ်ဆို ရင်လည်း ဖွင့်ပေးမှာပါ။ ဆေးရုံ တက်ရတဲ့အခြေအနေအပေါ်မူ တည်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာ စစ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးကပြောကြားသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ကိုနိုင်ငံတကာသို့ရောက်ရှိသူ ၁၆၁ ဦးလည်း စာရင်းပေးသွင်း ထားကြောင်း ယင်းအတွက်နိုင်ငံ ခြားမှဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် စာစစ်ဌာနများကို ဖွင့်လှစ်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ အကျဉ်း ထောင်စာစစ်ဌာန၊ မသန်စွမ်းစာ စစ်ဌာနများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပေး ထားကြောင်း သိရသည်။
မိခင်ဖြစ်သူက ယောက်ျားလျာဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံသည့်အတွက် ဂျေဇီဝမ်းသာ
အဂတိ လိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသော FDA ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အား မန္တလေ??
ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူ ရရှိရေးကို ဦးစားပေး ကြိုးစားနေပါက အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်း
ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက် ပါတီတစ်ရပ်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ငါးလခွဲကျော်ကြာသည်အထိ ထူးခြားမှုမရှိခြ